It is me. Ko Niknayman.: ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ခြင်း။
သပိတ်မှောက်ကံ ။ ။ ထိုအခါ ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီသည် မေတ္ထိယဘူမဇက ရဟန်းတို့၏ အဖော် ဖြစ်၏။ မေတ္ထိယဘူမဇက ရဟန်းတို့သည် ၀ဍ္ဎကို ဒါယကာ ငါတို့ကို မလ္လာမင်းသား ရှင်ဒဗ္ဗ ညှင်းဆဲသည်ကို သင် လျစ်လျူရှု၏။ "ယနေ့ ရှင်ဒဗ္ဗ သာသနာမှ ရွေ့လျောအောင် ဘုရားရှင်ထံ ဤသို့ လျှောက်လော" ဟု စေခိုင်း၏။ ၀ဍ္ဎသည် ဘုရားရှင်ထံ ချဉ်းကပ်၍ "မြတ်စွာဘုရား၊ ပရိတ်အိုး မီးလောင်ပါပြီ၊ ရှင်ဒဗ္ဗသည် တပည့်တော်၏ မယားကို ဖျက်ဆီးပါသည်" ဟု လျှောက်၏။ ဘုရားရှင် ခေါ်၍ မေးစစ်လတ်သော် မဟုတ်ရပါဟု လျှောက်ကြား၏။ ချစ်သားတို့ … ထိုသို့ဖြစ်လျှင် သံဃာသည် ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီအား သပိတ်ကို မှောက်လော၊ သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိသည်ကို ပြုလော။
ချစ်သားတို့ …. အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာအား သပိတ်ကို မှောက်အပ်၏။ ရဟန်းတုိ့အား လာဘ်မရအောင် ပြု၏။ အကျိုးမဲ့ ဘေးရန်ဖြစ်အောင် ပြု၏။ နေမြဲကျောင်း မနေရအောင် ပြု၏။ ရဟန်းတို့ကို ဆဲရေးကြိမ်းမောင်း၏။ (၄) … ရဟန်းချင်း ကွဲပြားအောင် ပြု၏။ ဘုရားကျေးဇူးမဲ့ ဆို၏။ တရားကျေးဇူးမဲ့ ဆို၏။ သံဃာကျေးဇူးမဲ့ ဆို၏။ (၄) …. ချစ်သားတို့ အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာအား သပိတ်ကို မှောက်ခြင်းငှာ ခွင့်ပြု၏။ မှောက်ပုံကား _ ဗျတ္တ ရဟန်းသည် သုဏာတုမေ စသော ဉ တ္တိဒုတိယကံဖြင့် သံဃာကို သိစေအပ်၏။ ၀ါ . ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီသည် ရှင်ဒဗ္ဗကို အရင်းမရှိသော သီလ၀ိပ္ပတ္တိဖြင့် စွပ်စွဲ၏။ သံဃာသည် ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီအား သပိတ်ကို မှောက်ရာ၏။ သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိသည်ကို ပြုရာ၏။ ပြပြီ ဟု ဆိုစေအပ်၏။
၀ဍ္ဎကန်တော့ခြင်း ။ ။ သပိတ်မှောက်ပြီးသောအခါ ရှင်အာနန္ဒာသည် ၀ဍ္ဎလိစ္ဆ၀ီထံ သွား၍ "ဒါယကာ ၀ဍ္ဎ၊ သံဃာသည် သင်အား သပိတ်မှောက်ပြီ၊ သံဃာနှင့် သုံးဆောင်ခြင်း မရှိပြီ။" ဟု မိန့်ဆို၏။ ၀ဍ္ဎသည် "ငါအား၊ သံဃာ သပိတ်မှောက်ပြီတဲ့" ဟု ထိုနေရာ၌ မိန့်မော၍ လဲကျသွား၏။ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့က မစိုးရိမ်လင့်၊ ငါတို့ ကျေနပ်အောင် တောင်းပန်ကြမည် ဟု ဆိုကုန်၏။ ထိုအခါ ၀ဍ္ဎသည် သားမယား၊ ဆွေမျိုးသားချင်းနှင့်တကွ စိုသောအ၀တ် စိုသောဆံဖြင့် ဘုရားရှင်ထံ ချဉ်းကပ်၍ ခြေရင်း၌ ၀ပ်စင်း၍ - အစ္စယောမံဘန္တေ အစ္စဂမာယထာဗာလံ - စသည်ဖြင့် ကန်တော့၏။ ၀ါ မြတ်စွာဘုရား၊ မိုက်မဲ တွေဝေသည့်အလျောက် အရင်းမရှိသော သီလ၀ိပတ္တိဖြင့် စွပ်စွဲမိပါပြီ။ ထိုအပြစ်ကို နောင်စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ သည်းခံတော်မူပါ ဟု ကန်တော့၏။
ဒါယကာ ၀ဍ္ဎ သင်သည် အပြစ်ကိုမြင်၍ တရားသဖြင့် ကုစား၏ ဘန္တေမယံပဋိဂ္ဂဏှာမ။ တေ-သင်၏ တံ-ထိုအပြစ်ကို မယံ၊ ငါတို့သည် ပဋိဂ္ဂဏှာမ-သည်းခံကုန်၏။ ဒါယကာ ၀ဍ္ဎ၊ အပြစ်ကိုမြင်၍ ဤတရားသဖြင့် ကုစားခြင်းသည် ကြီးပွားကြောင်း ဖြစ်၏။ နောင်အခါ စောင့်စည်းခြင်းသို့ ရောက်၏ ဟု မိန့်တော်မူ၏။
(သာဋီ - ငါသည် မသင့်သည်ကို ပြုမိပြီ။ ဘုရားရှင်သည်ကား များစွာသော အပြစ်တို့ကို သော်လည်း မကြံစည်မူ၍ ငါ၏အပြစ်ကို သည်းခံတော်မူလတ္တံ့ ဟု နှလုံးပိုက်၍ အစ္စယောမံဘန္တေ စသည်ဖြင့် ကန်တော့သည်။ ဉာယပဋိပတ္တိ - သင့်လျော်သော အကျင့်ကို လွန်၍ ဖြစ်သောသဘောသည် အစ္စယ မည်၏။ အပရာဓ မည်၏။ အပြစ် မည်၏။ မိမိကိုယ်တိုင် လွန်ကျူး၍ ဖြစ်စေအပ်သော အပြစ်သည် မိမိကို လွှမ်းမိုး၍ ဖြစ်လာသည် မည်၏။ အပြစ်ကို အပြစ်အားဖြင့် မြင်၍ တရားသဖြင့် ကုစား၍ နောင်စောင့်စည်းခြင်းသို့ ရောက်ခြင်းသည် ဘုရားရှင် သာသနာ၌ ကြီးပွားကြောင်း ဖြစ်၏။ ဒေသနာကိုကား ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ ကုစား၏။ နောင်စောင့်စည်းခြင်းသို့ ရောက်၏ ဟု ဟောသည်။ ။ ၀ဍ္ဎ အစ္စဂမာသည် အတိကမ္မပ၀တ္တော လွန်၍ ဖြစ်လာ၏။ ဘန္တေမယံပဋိဂ္ဂဏှာမသည် တံတေ အပရာဓံမယံခမာမ- သင်၏ အပြစ်ကို ငါတို့ သည်းခံကုန်၏။)
(ထာ - သပိတ်လှန်သောအခါ သုံးကြိမ်တောင်းပန်စေ၍ ဟတ္ထပါသ်ကို စွန့်စေ၍ ဉ တ္တိဒုတိယကံဖြင့် လှန်အပ်၏။)
(၀ိဋီ - - လာဘ်မရအောင် မပြု စသည်တို့၌ လာဘ်မရအောင် ပြုခြင်းစသည်မှ ရှောင်ကြဉ်သည် ဟု အဓိပ္ပာယ်ယူအပ်၏။) (မပြုဘဲ နေရုံဖြင့် သပိတ်မလှန်ရ၊ ၀ိရတီကုသိုလ် ဖြစ်မှ ဟူလို။)